Cisbitaallo u xirmay cabsida Ebola - BBC News Somali
Cisbitaallo u xirmay cabsida Ebola
Image caption Ebola ayaa dad badan ay ugu dhinteen galbedka Afrika
Cisbitaallo badan ayaa la xiray dalka Liberia, sababtoo ah shaqaalaha caafimaadka ayaa baqaya, mana aysan ku soo noqoyin shaqada, taasi waxaa ugu wacan 60 boqolkiiba dadka u dhintay xanuunta waxay kamid ahaayeen shaqaalaha caafimaadka.
Lewis Brown, Wasiirka warfaafinta ee Liberia ayaa sheegay inay jiraan warar ah in daawooyiinka xanuunada kale sida Malariyada laga xaday farmashiyaasha, taasina ay ugu wacantahay intabadan dadka reer Liberia waxay ka baqayaan inay Ebola kaqaadaan xarumaha caafimaadka.
Wasiirka warfaafinta Liberia, Lewis Brown, ayaa BBC-da sidoo kale u xaqiijiyay inkastoo xaaladda gudaha xuntahay hadana ugu yaraan caalamka uu ka jawaabay musiibada.
Agaasimaha xarunta xadididda cudur iyo ka hortagga ee dalka Mareykanka ee CDC, Dr Thomas Frieden, ayaa Congress ka u sheegay in laantooda ay howlgelisay inkabadan 200 oo qof oo ka shaqeynaya Ebola, ayna taasi soo dedejisay in hadda la helo ugu yaraan 50 khubaro kasocota galbeedka Afrika oo ah meesha waaya aragga u ah Ebola uuna ku dilay in kabadan 900 oo qof. Waxa uu qiray in halista xaaladda hadda aysan sii socondoonin.
Image caption Intabadan dadka uu ku dhacay Ebola way dhinteen
Waxaa dhintay boqolkiiba 55 ama 60 dadkii uu ku dhacay cudurka, taas oo muujineysa in ay yartahay qof dib uga caafimaada Ebola.
Sikastaba, dadka ka badbaaday xanuunka Ebola waxay lakulmayaan faquuq ama takoor, xittaa iyagoo aan cudurka qabin oo ka fiicnaaday.
Sylvia waxay u dhalatay dalka Guinean, waana ardeyad baraneysa caafimaadka, waxay ka badbaaday Ebola.
Waxaa warqad cadeyneysa inay ka fiyoobaatay xanuunka laga siiyay xaruntii lagu daaweynaayay oo ku taalla gudaha dalka Guinea.
Balse waxaa ku adkaatay inay sidii caadiga ahayd ay ku soo noqoto iyadoo dadka ay ka ordaayaan, xittaa ardeydii ay wax islabaranayeen ayaa weydiisanaya inay xaafadda iska joogto.